Ukukwazi abantwana kuba yenye yeyona nto imnandi kakhulu kumama. Ewe, kulungile ukuba uqale ukufunda ukukhwela ngaphambi kokuzalwa komntwana, ukhulelwe. Kwaye kukulungele ukuqala uqeqesho lwakho ngokulula, kodwa izinto ezinjalo ziyimfuneko kubantwana, njengama-booties okanye i-cap's baby. Konke oku kufumaneka lula ngokuncedwa ngesikhonkco, umtya weentambo zokudibanisa, ukucinga kwakho kunye nomnqweno wokwenza into enhle nomhle kumntwana wakho ngezandla zakho.
Ikhutshana lesana yinto yokuqala efunekayo kwi-wardrobe yintsana. Ukubopha inqwelo enjalo akunzima nakwi-knitter yokuqala. Kubalulekile apha nje ukuba ube nobungcali bemikhakha yomoya kunye namakholomu kunye nangaphandle kwekhonkethi. Ukukhonkxa kwinqanawa lesana, uya kufuna iingubo ezincinci kunye ne-hook.
Ikhefu kufuneka yenzelwe ukujikeleza kwentloko, malunga ne-35-38 cm. Siqala ukudibanisa kunye neketani malunga no-30 cm, ephoswe ngomoya. Emva koko sadibanisa i-crochet stitches. Sifanele sibe nexande ngokuphakama kwe-10-11 cm. Phula umgca uze udibanise i-bonnet. Gcwalisa ikhonteli lethu kwisiqingatha kunye naphakathi phakathi kwimiba yomibini ulinganise u-4-5 cm, uwamakishe ngezikhonkwane. Sisebenzisa ikholomu nge-crochet ukudibanisa umgca wokuqala wecala elingemuva. Kwimacala omabini kwimigca emi-2-4 esiyifakayo kwikholam nge-crochet. Ukususela kumgca wekholam yokugqibela kufuneka sikhulule iikholomu ezongezelelweyo. Ububanzi besikhomba kufuneka sibe ngu-10 cm. Ngoku, ukuqala kwinani ngalinye elingaqhelekanga, sinciphisa ikholamu enye ukusuka kumacala amabini. Yonke imigca yecala lebhokisi kunye nomqolo wayo kufuneka ihambisane. Sidibanisa umgca we-lateral kunye nenxenye yangemuva, udibanisa nabo ngoncedo lwamakholomu ngaphandle kwekhonkco. Ukukhupha ngexesha elifanayo kwiindawo zombini zekotwe. Umthungo kufuneka ubonakale njenge-pigtail uze uhambe ngaphandle. Musa ukucima umtya. Kwi-bendet ye-bhonet sinamathela kwiikholomu ngaphandle kwekhonkethi, kwaye i-suture yesibini yenziwa ngendlela echazwe ngasentla. Ngaphantsi kwekhefu kufuneka ibe ngumgca. Sifumane isiseko senqwelwana. Ikhefu ingashiywa kwifomu yayo yasekuqaleni, ukuthungela kuwo, okanye uyayihobisa ngentambo yomtya kwi-braam-braid. Ungakwazi ukugubha izindebe okanye wenze umzobo ococekileyo wezingane.
Ukuze i-cap ibe nombono omhle, siwubophe ngeenxa zonke kwisangqa, sinyanzelise intambo. Izibopho esizenzayo, ukuthayipha ukusuka kumgca wesikhokelo ubude obufunekayo bekholeji ngoncedo lwama-loops emoyeni. Omnye umgca sidibene kunye neepaliti zesiqingatha, sifaka iqhosha kunye ne-tie ilungile. Njalo intambo yesibini.
Ukukhusela abantwana kwiintsana
Ukubambisa iipinethi, kuyafaneleka ukuthenga iintambo zomntwana zeconti kwisiqingatha se-skein esilingana nama-25 gram (malunga neekhilomitha ezingama-90) kunye nenkokhelo nayiphi na ubude nobungakanani.
Ukukwazi ukuba siqala ngethungelwano lomoya, ubude obungaba malunga no-5 cm. Sadibanisa i-sole of the booties, esenza isithende silingana ngeenxa zonke kunye ne-protrusion ngohlobo lwenxantathu kwiisokisi kwenye. Ngoko kuyimfuneko ukudibanisa de kube yinto enye ye-9 cm.
Sidlulisela phezulu kwi-booties. Nakhu kufuneka sikwenze isithintelo, okufana nesifana esithende kwaye sibonakala kwizwane. Ukuphakama kwethu kufuneka kube malunga no-2.5 ​​cm.
Ngoko, ukufika kweli nqanaba ama-booties ethu ayanamathela ngaphandle kwekhonkco ngeentonga - ngoku sidibanisa umgca o-1 kunye namakholomu ene-crochet eya kusinceda ukuba "siphakamise" ama-booties ethu. Musa ukulibala ukuba kufuneka unciphise i-sock ngaphezulu. Isithende siboshwe ngentambo engenazo ikhonkethi. Emva kokuba "siphakamise" ngaphambili kwee-booties, udibanisa umgca nge-crochet.
Ngenxa yoko, sinobuchule bokulungelelanisa. Kubaluleke kakhulu ukubopha i-booties yesibili yobukhulu obufanayo. Ngoko ke, kuyimfuneko ukwenza yonke imilinganiselo efunekayo nomlawuli okanye i-tentimenti tape kwaye kuphela, emva koko kufumaneka amanani afumanekayo, qalisa ukudibanisa i-booties yesibili.
Iibhokhwe ezilungele ukulungiswa ziyakunokubhenwa ngekriti okanye ilayiti. Ungasebenzisa kwakhona ubuhlalu, obufanele buqatshelwe kakhulu. Into ephambili - musa ukusebenzisa izinto ezibukhali ngendlela yobunxibe, oko umntwana angalimaza!
Imithi ephuma kwiintlobo: i-sakura ne-birch
I-bracelet enhle enezandla ngezandla zakho
Kutheni abafana bakhetha abahlobo baze balahle intombazana yabo?
Izizathu ezibalulekileyo zokungcatsha indoda
Iiresiphi zokutya ezilula kwaye ezihlwaya
I-Wii ifanelekile: ukunciphisa umzimba
Yintoni ekhoyo ngoku ifenitshala ephathekayo ephathekayo
Iimbali ezimbalwa malunga neenzuzo zobhiya